Andininy 2.- Ny Fanjakana dia manamafy ny tsy fombàny ny atsy sy ny aroa eo anatrehan'ny finoana samy hafa.
Ny tsy fampifangaroana ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin’ny Repoblika dia miankina amin'ny foto-kevitra mikasika ny fisarahan'ny raharaham-panjakana sy ny fikambanam-pivavahana ary ny solontenany.
Ny Fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana dia tena tsy mahazo mifampitsabatsabaka eo amin'ny sehatrasan'izy ireo tsirairay avy.
Tsy misy mihitsy Lehiben'Andrim-panjakana na mambra ao amin'ny Governemanta afaka miditra any amin'ny ambaratongam-pitarihana ny fikambanam-pivavahana iray; raha tsy izany dia azon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana atao ny manongana azy na heverina ho toy ny mametra-pialàna avy hatrany amin'ny asany na ny raharahany izy.
Andininy 6.- Ny lalàna dia maneho ny safidim-bahoaka. Mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, na izy natao hiarovana, na izy natao handidy, na izy natao hamaizana.
Mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, samy manana fahalalahana fototra arovan'ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny maha-lahy na amin'ny maha-vavy, na amin'ny fari-pahalalàna, na amin'ny fari-piainana, na amin'ny fiaviana, na amin'ny finoana, na amin'ny tsy fitovian-kevitra."
Raha jerena indray momba ny fianianan'ny Filoham-pirenena dia izao no voalazan'ny Lalampanorenana hatrany:
"Ny amin’ny Filohan’ny Repoblika
Fidina hiasa mandritra ny dimy taona azo havaozina indray mandeha monja, amin’ny alàlan'ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana izy.
Andininy 48.- Ny fanoloram-pahefana ofisialy dia atao eo amin’ny Filoha teo aloha sy ny Filoha voafidy vaovao.
Alohan’ny handraisany ny asany, ny Filohan’ny Repoblika, amin’ny fotoam-pitsarana manetriketrika ataon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, eo anoloan’ny Firenena sy eo anatrehan’ny Governemanta, ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona ary ny Fitsarana Tampony, dia manao izao fianianana izao :
“ Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan’ny Firenena Malagasy ahy.
Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka Malagasy tsy ankanavaka ”.
Manomboka ny andro nanaovana ny fianianana ny fe-potoana iasan’ny Filohan’ny Repoblika."
Ary mbola amafisin'ny
"Andininy 49.- Ny asan’ny Filohan’ny Repoblika dia tsy azo ampirafesina aminà asam-panjakana nahavoafidim-bahoaka, asa aman-draharaha hafa, asa ao anatin’ny antoko politika, vondrona politika, na fikambanana, ary fisahanana andraikitra eo anivon’ny fikambanam-pivavahana.
Izay rehetra fandikana ireo fepetra voalazan’ity andininy ity, voamarin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, dia zary ho antony amin’ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an’ny Filohan’ny Repoblika".
Izany hoe izay Filoham-pirenena misalovana andraikitra ara-pivavahana dia azo esorina amin'ny toerany.
Ny fanontaniana izany dia ny hoe, vao eo amin'ny Savaranonando, izay fenitra faratapony amin'ny Lalampanorenana dia milaza fa "Mametraka ny finoany an'Andriamanitra Andriananahary", nefa dia ferana indray hoe, tany Laika, ka tsy mahazo mitsabaka ara-pinoana, indrindra ny hoe tsy mahazo asiana fotoam-pivavahana sy mianiana amin'ny Baiboly?
Tsy hiadiana hevitra aloha eto ny hoe ny Malagasy dia samy manana ny finoany, misy ny Kristianina, misy ny Silamo, misy ny finoana ara-drazana, ary misy ny tsy mino.
Ny Filoham-pirenena dia Filohan'ny Malagasy rehetra, ka tsy tokony hiandany amin'ny finoana iray izy izany.
Ny Lalampanorenana dia tsy nilaza fa mianiana amin'ny Baiboly, ary eto dia Fotoam-pitsarana no atao.
Izany hoe raharam-pitsarana, ka ny Filohan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana no mitarika ny fotoam-pitsarana, ka amin'ny maha raharaha-mpitsarana azy, dia mitsara sy mamoaka Didy amin'ny anaran'ny vahoaka Malagasy izy, ka tsy misy resaka finoana eo izany, noho izany tsy ampianiana ny Filoham-pirenena vaovao manoloana ny Baiboly izany ny Fitsarana.
Ny tranom-panjakana na biraom-panjakana rehetra dia tsy azo asiana famantarana ara-pivavahana, toy ny lakroa, na sary...
Ny hetsika ara-panjakana, izay ialan'ny volam-panjakana, izany hoe volan'ny Kristianina, ny Silamo, ny Mpino ara-drazana, na ny tsy mpino, dia tsy azo asiana ireny fotoam-pivavahana alohan'ny hetsika ireny.
Ny marina, na ao anaty lapam-panjakana rehetra aza dia tsy tokony hisy chappele na toeram-pivavahana manokana.
Amin'ny hetsika manokana, na any an-tranoniny no azo anaovana izay fotoam-pivavahana izay(Cérémonie privée)
Mety hisy hiteny hoe avela anjaka ary ve ny asan'ny ratsy raha esorina ny fivavahana, efa fomba fijerin'ny olona mivavaka izay, ka ny Lalampanorenana no mila iadian-kevitra raha izay, satria na ny Hiram-pirenentsika aza, dia hiram-pivavahana.
Isika Malagasy izany te handika ny an'olona any ivelany fotsiny fa tsy mijoro amin'ny tena finoantsika.
Any Amerika dia milaza mazava ny Lalampanorenany fa misaraka ny fanjakana sy ny finoana, fa ireo filoha nifadimby dia nianiana tamin'ny Baiboly, misy tsy nanao izany, misy no naka Baiboly 2 mihitsy, ny azy fahazaza, ary ny Baibolin'i Abraham Lincoln, filoha voalohan'ny antoko repoblikanina amerikanina, toa an'i Donald Trump.
Any Frantsa, dia tsy azo ampidirina ny resaka finoana, izay io narahatsika io.
Isika dia mihatsaravelatsihy, nefa ny kalendrie tsika na ny alimanaka, dia Calendrier grégorien na Calendrier Catholique, izay ny Pape Grégoire no nametraka azy.
Misy ny Noely, nahaterahan'i Jesoa Kristy, misy ny Paka, nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, misy ny ascenssion, niakaran'i Kristy tany an-danitra, Misy ny Pantekoty, nidinan'ny Fanahy Masina tamin'ireo mpianatry Kristy, misy ny Assomption, niakaran'i Masina Maria, Renin'i Jesoa Kristy tany an-danitra, misy ny Toussaint 1 novambra, fankalazana ny Olomasina (Fa tsy fetin'ny maty akory, ny fetin'ny maty 2 novambra, miasa), ary ny alahady dia andro tsy fiasana.
Safidy mila dinihina izany ireo resaka finoana sy fanjakana io, fa amin'izao aloha dia "Dura lex, sed lex", « dure est la loi, mais c’est la loi ». Henjana ny Lalàna fa izay no Lalàna.